Ma xaaska Trump baa mise waa boombale loo ekeysiiyay? - BBC News Somali
Ma xaaska Trump baa mise waa boombale loo ekeysiiyay?
Image caption Sawirka shakiga dhaliyay ee Melania Trump
Waxaa soo kordhaya waxyaabaha la yaabka leh ee ku saabsan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump , wixii ugu dambeeyayna waxa ay ahaayeen shaki laga muujiyay xaaskiisa.
Trump ayaa saxaafadda soo hor istaagay isaga oo ay la socoto xaaskiisa Melania Trump, balse dad badan ayaa shaki ka muujiyay in qofka la socday ay ahayd xaaskiisa Melania ee dhabta ah.
Waxyaabaha shakiga keenay ayaa ah in qofka la socda Trump uusan ahayn qof muujinaya shucuurta bini'aadam, ama hadlaya, dadka qaarkoodna waxa ay ku tilmaameen in qofka uu yahay boombale loosoo ekeysiiyay Melania ama qof iyada u eg.
Waxaa shakiga sii kordhiyay markii Trump laftiisa uu yiri "Waxaan u mahadcelinayaa xaaskayga Melania, oo hadda dhanka midig iga taagan sida aad arki kartaan".
Xaaska iyo wiilka Trump oo markii koobaad u wareegay Aqalka Cad
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aad ugu maadeystay arrintan, waxayna qaarkood sheegeen in Trump iyo Melania ay kala tageen, balse uusan sheegi karin, kadibna uu soo watay qof u eg ama boombale loo ekeysiiyay.
Waxyaabaha farta lagu fiiqay waxaa ka mid ah in itaalka Melania ee muuqaaladii hore ay ka dheertahay qofka markan la taagnaa.
Balse wargaysyada qaarkood ayaa ku doodaya in qofka Trump ka garab muuqday ay ahayd xaaskiisa Melania, wararka la baahinayana ay yihiin kuwa been abuur ah.
Wargeyska Washington Post ayaa soo bandhigay sawir kale oo laga qaaday Melania waxyar kadib marka laga qaaday sawirka hore ee shakiga dhaliyay ee ay ookiyaalka xirantahay.
Xagga dherarka wargeyska waxa uu tilmaamay in ay xirnayd kabbo aanan qoobab lahayn si ka duwan sawiraddii hore ee laga hayay gabadhan.
Horay waxaa u jiray warar la baahiyay oo ku saabsan in uu jiro qof u eg Hillary Clinton oo ahayd xaaska madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton. Wararkan ayaa soo if baxay sanadkii hore, waxayna dadka qaar sheegeen in qof lagu arkay iyada oo ka baxaysa goob baroordiiq ah ay ahayd haweenayda lagu magacaabo Teresa Barnwell oo laga soo bilaabi sanadkii 1993-dii jilli jirtay Hillary.
Teresa ayaa Hillary kula kulantay xaflad buug sixiix ah sanadkii 1996-dii, waxayna Hillary ku tiri Teresa "Ma adigaa qofka iska kay dhiga, ee sameeya waxyaabaha aanan jecleyn in la sameeyo".
Hadalhaynta ku saabsan in uu jiro qof iska dhiga Melania ayaa aad u kordhay, waxayna dadka shabakada Google-ka ka raadinayaan sawirada qofkan.
Illaa intii madaxweynaha Maraykanka loo doortay Donald Trump waxaa aad u kordhay wararka ku saabsan xaaskiisa, waxaana xitaa dhawaan soo shaacbaxay khilaaf u dhaxeeya Melania iyo xaaskii hore ee madaxweynaha Ivana Trump.